Ngabe ufuna isiza sokufunda isiJalimane? Linda, ufike endaweni efanele! Le yipulatifomu enkulu yezemfundo yaseJalimane i-almancax.
Kuwebhusayithi yethu ethi www.almancax.com, labo abangasikhulumi nhlobo isiJalimane, bafunda isiJalimane bebodwa, labo abafuna ukuthuthukisa abafundi babo baseJalimane, abalingani babo kanye nabafundi bezikole eziphakeme bafunda kalula isiJalimane futhi bathuthukise isiJalimane sabo.
Isayithi lethu linakho konke okudingayo ukuze ufunde isiJalimane. Izifundo ezibukwayo nezibhaliwe zaseJalimane, izifundo zevidiyo zaseJalimane, imidlalo yamagama yesiJalimane, izinhlelo zokusebenza zokufunda zaseJalimane zamafoni we-android, izinkundla zaseJalimane nezaseJalimane, insiza yamahhala yokuhumusha yaseJalimane, izincwadi zokufunda zaseJalimane nezinkulungwane zezifundo, imibhalo namafayela esingakwazi ukuwabala, ayatholakala esizeni sethu.
Yiziphi izifundo ezitholakalayo esizeni sethu, sizibhalele kafushane ezinye zazo ngezansi. Ngokudlulisa amehlo kusayithi lethu, ungafinyelela ezifundweni eziningi zaseJalimane futhi ujabulele ukufunda isiJalimane online lapho uhlala khona. Izihloko zesampula ezivela kwezinye izifundo zaseJalimane esizeni sethu zimi kanje.
Ngaphandle kwezifundo ezingenhla, ezinye izihloko zethu ezizosiza abangani abafunda isiJalimane zingokulandelayo. Ungathola okuningi ngokuphequlula isiza sethu.
Ezemidlalo zaseJalimane neMidlalo yaseJalimane
Imiqondo yegama lesiJalimane (Ukunciphisa Der Substantive)
Isibikezelo sezulu saseJalimane
Ukuvivinya igama lesiJalimane i-Akkusativ
Izinombolo zesiJalimane nezinombolo zesiJalimane Zizivocavoca
Ama-Articels aqondile (Bestim Artikel)
NgesiJalimane, Kuphi I-Articels Eyisebenzisayo, Ukuphi Ukusebenzisa, Ukuyisebenzisa Kanjani?
Ama-German Watchings Illustrated
Amagama aseJalimane (okuyisisekelo)
Izichasiso ngesiJalimane (i-Adjektiv-Deklination)
Izichasiselo zesiJalimane nezigatshana ezichazayo
Imithetho yama-Single Names Pluralization yaseJalimane
Ngaphandle kwezifundo zethu zaseJalimane ezingenhla, ungathola izinkulungwane zezinye izihloko ongazifunda ngesiJalimane kuwebhusayithi yethu nakumaforamu ethu.
Sifisela wena impumelelo ekufundeni isiJalimane.
Tags: izifundo zaseJalimane, indlela yokufunda german, funda isiJalimane, indawo yokufunda yaseJalimane, isayithi lokufundisa laseJalimane, izifundo ze-German ezisemuva, funda isiJalimane online